Igbo, Tracts, UZI NKE 10 -- Gi onwe-gi atula egwu: n'ihi na ab͕aputawom gi, akpọwom gi n'aha; ị bụ nke m! | Waters of Life
Home -- Igbo -- Tracts -- Tract 10 (Do not be afraid, for I have redeemed you, I have called you by name; you are Mine!)
UZI NKE 10 - Ị ga-eji obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ Chineke gị n'anya ( Aịsaịa 43:1)
Onye ọ bụla na-atụ egwu nsogbu na ihe ize ndụ na-adakwasị ha. Onye ọ bụla na-enwe ihe ijuanya mgbe ihe mberede mere n'akụkụ ya. Obi na-ama ya jijiji mgbe ọ nụrụ banyere ọbara agha na ọrịa ndị dị egwu na ya. Ụfọdụ ndị na-atụ egwu na-enwe ịda mbà n'obi, na-ebi ndụ dịka ụjọ ji. Ma Onyenwe anyị gbochiri gị ịtụ egwu, n'ihi nà Ọ dị ndụ, Ọ dịkwa ike karịa ike ọ bụla nwere ike ịwakpo gị. Ọ maara ihe karịa nhụjuanya gị. Ya mere, nụrụ ihe Ọ na-agwa gị.
Chineke na-egbochi gị ịtụ egwu mmụọ na-adịghị ọcha na Jinn. Ọ chọrọ ka ị hapụ ikwere na anya ọjọọ. Ghara itinye akwa pel n'elu uwe ụmụaka, kwụkwasị onyinya na-ekpuchi ọnụ ụzọ ụlọ gị, na ịkụ aka na osisi. Onye ọ bụla nke na-eme otú a na-ekwupụta na ndị mmụọ n'azụ ememe ndị a dị ike karịa Onyenwe anyị n'onwe Ya. Chineke bụ Onye Pụrụ Ime Ihe Niile, dị njikere ma nwee ike ichebe gị n'ihi na Ọ dị ike karịa mmụọ niile.
Onyenwe anyi huru gi n'anya ma mee ka i nwere onwe gi n'egwu nke ihe di n'ihu. Atụla egwu na agha, site na nuklia fallout, na site na mmụba nke mmetọ na ụwa. A ga-ahụ na ọdịnihu na ọ dịghị ihe omume nke mmadụ nwere ike ịzọpụta ụwa. Enweghị ihe ngwọta maka anyị ma e wezụga Chineke. Ọ dị ukwuu karịa ihe nkedo niile. Tụkwasị Ya obi kpamkpam.
Onye Okike gị chọrọ ịkwụsị ịtụ egwu, enweghị ọrụ, agụụ na ịda mbà n'obi n'ime gị. Ọ dị njikere inyere gị aka ma kee onwe ya nye gị. Ya mere, na-arụsi ọrụ ike na ọrụ gị ma na-ekwesị ntụkwasị obi n'ọrụ gị kwa ụbọchị, mgbe ahụ ị ga-ahụ na Onyenwe anyị ga-agọzi gị n'ụba. Lee anya na Ya, ị ga-enweta nduzi na nkasi obi n'etiti nsogbu.
Onye-nwe-ayi geme ka i pua n'aka ndi-iro-gi, na ndi nākpọ gi asì, na ndi nāpunara gi ihe, na ndi nāpunara madu ihe. Ọ ga-echebe gị ma ọ bụrụ na i chigharịkwuru Ya ma nọgide n'ime Ya. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa na enweghị nchekasị nwere ike iju gị, Onyenwe anyị ga-abụ ike na olileanya gị. Ya mere, ahapụla Ya; Ọ ga-edebe gị n'aha Ya.
Onyenwe anyi ebighiebi gbochi gi ka i tua egwu onwu, ka i ghara isi n'inye gi ntaramahuhu n'ili, ma maa jijiji site na oku oku. O nwere ike, ma chọọ ịzọpụta gị ma chebe gị. Chineke adighi anwu dika ufodu ndi ajoro si ekwu, kama obu Ya bu isi iyi nke ndu. Bịaruo Ya nso ma nọgide na Ya, mgbe ahụ ị ga-enwe udo n'etiti ndụ na ọnwụ.
Chineke bụ onye ziri ezi ma n'otu oge ahụ, onye na-ekpebi mmehie gị nile. Naanị O nwere ike ido gị nsọ site n'omume ọjọọ gị. O choghi ibibi gi site n'iwe Ya n'oge ikpé. Echela na ị nwere ike ịzọpụta onwe gị site n'ezi omume gị. Chineke n'onwe ya hụrụ gị n'anya ma meghere gị ụzọ maka inwe ọganihu ebighị ebi.
Onye ahu nke juputara na ndu ebigh ebi di njikere ichebe gi onwe gi, iji zoputa gi site na obi gi di ocha, na imeri mpako gi. Ọ ga-ewusi gị ike na ọnwụnwa gị, ị ga-emeri okwu ụgha ndị ahụ na-agba ọsọ ọsọ karịa ire gị. Ya mere meeghe obi gi nye Mo Nso Ya, n'ihi na O ga edo gi nso n'ihi na O di nso.
Onyenwe anyị na-agba gị ume ka ị nọrọ n'udo n'ọnọdụ niile ọ bụla. O kpugheere n'ime Akwụkwọ Nsọ, ugboro 365, iwu doro anya ya nyere: "Atụla egwu." Nke a metụtara ndị mmadụ, ezinụlọ na ndị mmadụ - ndị ikom na ndị inyom. I nwere ike ime ihe a nke Onyenwe anyi kwa ubochi nke afo, nke mere ka egwu ghara ichikota gi, mana gi ga-emeri ya site n'ike nke Onyenwe anyi. Na-enye ndụ gị, atụmatụ gị, na ọchịagha nke ọdịnihu ị ga-abịakwute Kraịst mgbe ahụ ọ ga-elekọta gị karịa nna nna ụwa ọ bụla pụrụ, ọ ga-echebekwa gị ma gọzie gị n'ụba.
Ozugbo ị meghere obi gị na-atụ egwu Ya, ị na-enweta ìhè na ike na i nwere ike ikwere na Ya ma hụ Ya n'anya ma nweta olileanya maka ọdịnihu. Mgbe ahụ, ihe egwu ndị na-eche n'ihu gị ga-ejideghị gị. Onyenwe anyi n'egosiputara gi ihe omimi nke ihe mere O ji choro ka i nwere onwe gi n'ihe ojoo na egwu nile; Ọ na - agwa gị:
Enweela m gị
A na-eleda ụmụ Jekọb anya na ndị ohu n Ijipt, ndị Fero ewee megbuo ha. Ma, ha tụkwasịrị Jehova obi na nlekọta nna ya. Ya mere, Ọ gwara ha ka ezinụlọ ọ bụla gbuo nwa atụrụ na-enweghị mmerụ, nakwa na onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ ga-etinye aka na ọbara nke ọbara awụfuru, nke mere na iwe nke Onye Pụrụ Ime Ihe Nile ga-esi na ha pụọ. Ọ bụrụ na ha agaghị eme ya, Ọ ga-ebibi ha maka mmehie ha. Ụmụ Jekọb rubere isi n'iwu nke Onyenwe anyị wee tụkwasị obi na oku Ya. Ya mere, O wepuru ha site n'igbu ohu ha site n'bara Nwa Aturu nke Nwa Aturu nke Chineke ma duo ha n'ime nnaputa na nnwere onwe.
Abraham nwekwara ihe nzuzo nke mgbapụta, mgbe ọ gbalịrị ịchụ nwa ya nwoke kwadoro n'àjà, ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ, iji nye Chineke otuto. Ma Onyenwe anyi gbochiri ya igbu mmadu dika aja ma gbachi ya ka o gbuo nwa ya nwoke, n'ihi na Onyenwe anyi, ya onwe ya ji ya buru nnukwu onyinye (Sura Al-Saffat 37:107). N'ụzọ dị otú a, Chineke dị nsọ, n'ime amara Ya, gbapụtara ụmụ Abraham nile site n'àjà dị ukwuu, na-agbapụta ha ruo mgbe ebighị ebi.
Taa, nkwa nke Onyenwe anyị, "agbapụtawo m gị," na-abịakwute gị. E dere nkwa a n'oge gara aga, n'ihi na emeelarịrị ihe ahụ maka gị. Nke a na-agwa gị na nzọpụta gị zuru oke, ọ dịghịkwa mkpa ime ya ọzọ. Onyenwe anyị dị ndụ chọrọ imezu mgbapụta Ya zuru ezu n'ime gị, ka i wee ghara ịtụ egwu ụwa a ma ọ bụ nke ọzọ, ka ị ghara ịsị "ma eleghị anya" Ọ ga-agbapụta m. Chineke Nke puru ime ihe nile gbaputara gi site na ubochi nke Setan, na ike nke nmehie nime gi. Ị ga-amata na mgbapụta gị bụ nke a kwadoro n'ụzọ iwu. Ọ bụghị gị ka ị ga-azọpụta onwe gị site na ibu ọnụ, ikpe ekpere, onyinye, njem ma ọ bụ ịlụ ọgụ maka Chineke. Onyenwe anyi emezuchala nnukwu mgbaputa nye gi, nye kwa gi nzoputa ya dika ihe ziri ezi gi, nke apughi itu ajita. O nyere gi amara Ya n'efu. Ya mere, atụla egwu, kama nata ihe ùgwù gị, kwere na mgbapụta gị, tụkwasịkwa obi n'Okwu nke Onyenwe gị. Ọ bụrụ na ị kwenyere na mgbapụta gị, a ga-eme ya n'ime gị dịka okwukwe gị si dị.
O nwere ike iju gi anya na Onye nwe nkwekorita nyere nkwa a, "agbaputawo m gi," karia ndi isi ike ndi achupuru na Babilon. Onyenwe anyi kwere ka ewefue ha n'ihi nkwenye ha na mmegide megide Ya. Ha ga-ahapụ ụlọ ha na mba ha, ma tụba ha n'ọzara 800 kilomita site na ụlọ nsọ ha. Ha na-arịa ọrịa ma na-atụ ụjọ ma na-enweghị enyemaka, ụfọdụ n'ime ha chetara mmehie ha. Ha enweghị ngwá agha na enweghị ego. Ha enweghị ihe ọ bụla ọzọ ma e wezụga ndụ ha na Onyenwe ha. N'ebe a dị egwu, Onye Pụrụ Ime Ihe Nile mesiri ha obi ike, "Tụkwasị m obi, atụla egwu: n'ihi na agbapụtawo m, akpọwo m gị n'aha, enwekwara m ike karịa ike nile na-emeka ịbụrụ ndị ohu."
N'agbanyeghị ọnọdụ gị, jide n'aka na Chineke nke nwere obi ebere chọrọ ịhapụ gị pụọ n'egwu gị, na nhụsianya gị, na site n'ịnwụ ọnwụ. Ọ gbapụtara gị site n'ọnwụ ọnwụ nke Kraịst - n'ụzọ iwu na ruo mgbe ebighị ebi. Nwa nke Meri bụ Nwa Atụrụ nke Chineke na onye na-anọchite anya gị nke diri ntaramahụhụ nke obe maka mmehie gị. Ya mere, Onye Okike gị agaghị abụ onyeikpe gị na-enweghị obi ebere, mana Ọ bụ Onye na-eme ka ị kweta na-agbaghara gị dịka Nna nke ime mmụọ, dị njikere inyere gị aka kwa ụbọchị.
Ejiri m Aha gụọ gị
Echefula na Onyenwe anyi n'anya hutara gi n'ezie! Ị nwere ọrụ ọrụ ebube a ma ọ bụ na ọ bụghị? Onye nwe obi ebere akwadebewo gi nnwere onwe zuru oke site na nmehie, site n'onwu na site onwunwa nke ekwensu. Ma Onyenwe anyị na-eme ihe karịrị nke a maka gị. Ọ na-akpọ gị onwe gị. Ọ naghị akpọ gị dị ka onye ikpe na-atụ ụjọ. Ee e, O chighariri n'ebe i nọ n'amara, n'ihi na iwe ya gafere gi, ma oburu na i tukwasiri obi na nchedo nke Nwa Aturu Chineke. Jehova maara aha gị. Ọ maara onye ị bụ, karịa ka ị maara onwe gị. Ọ maara ihe nzuzo gị niile; ha na-emeghere Ya. N'agbanyeghị ihe a nile, Ọ hụrụ gị n'anya dị ka ị dị.
Lee akụkọ dị ịtụnanya! Chineke ukwu ahụ na-akpọ gị, onye dị ntakịrị, n'aha gị. Ị dị mkpa nye Ya. Ọ maara gị na ilekọta gị. Ọ chọrọ inye gị onyinye Ya ma wepụta gị n'ịnọdụ nke ịgba ohu. Mgbe ọ bụla nna ma ọ bụ nne na-akpọ nwa ha n'aha, ka ọ na-egwu n'èzí, nwatakịrị a maara, mgbe ọ nụrụ oku ahụ, na amapụtara ya na ọ ghaghị ịzaghachi ma ọ bụ nsogbu ga-ebili. Ya mere, kpachara anya ma mara na Onye Okike gị kpọrọ gị na Onye Mgbapụta gị na-agwa gị na Onye nkasi obi gị na-adọta gị onwe gị. Ogologo mgbe O na agwa gi okwu, O na-ebuli gi elu ruo n'ogo nke ya, n'ihi na O na agwa gi okwu, okwu ya ga eme ka i di ndu. Echefula na Onyenwe anyị kpọrọ gị. Echefula oku Ya, n'ihi na na oku a Ọ na-enye gị ebere Ya na amara Ya.
Mgbe Kraist bi n'etiti ayi n'elu uwa, O gara n'ili nke enyi ya Lazarọs, onye nwuru ubochi ato tupu O rute. Jizos gwara ndi gbara Ya gburugburu ka ha wep ta nkume ah n'ílì, ma ha achoghi ime ya, n'ihi na Lazaros anwoano chzo chi abo wee nye kwa iheo joo. Jizos kwusiri ike, ma mgbe e chigharịrị nkume ahụ, O ji oké olu kpọọ, "Lazarọs, puta pụta." Mgbe ahụ, ahụ ahụ e ji ákwà linin pụta. Olu nke Kraist nwere ike ime ka ndi nwuru anwu bilie. (Jọn 11:34-44, Sura Al-'Imran 3:49) Oku nke Ọkpara nke Meri nwere ikike zuru oke na ike nke Chineke.
Kraist taa na Chineke n no ,o kpo ro kwa ndi ah nke choro inu olu Ya. Ọ na-akpọ gị taa site n'aha gị. Nwepu mpako gi na O geme ka i si na nmehie gi bilie, mee ka i di ndu, ma chebe gi n'ime Onye nzoputa gi. Atụla oge kama zaa Onyenwe gị ma kelee Ya maka òkù Ọ kpọrọ gị.
Ikekwe ị maara na okwu Grik maka ụka, "Ecclesia," nwere ihe pụrụ iche tupu Kraịst abịa. Ọ pụtara na obodo ọ bụla nwere ọrụ maka onwe ya, ndị bi na-eme mkpebi site na nchịkọta nke "ndị ọrụ." A kpọrọ ndị ọrụ a n'etiti obodo iji mee mkpebi maka agha ma ọ bụ udo, banyere ụtụ isi ma ọ bụ iwu, na ihe niile na-emetụta ndụ n'obodo ahụ. Aha nke nzuko nke ndi isi obodo bu Ecclesia, nke putara ndi akpotara. Ndị Ecclesia ma ọ bụ ndị a na-akpọ ga-ejikọta ọrụ nke obodo ha. Jisos na ndi ozi ya jiri okwu a kọwaa ihe omuma nke nzuko, ma gua ya Ecclesia. Nke a pụtara na onye ọ bụla nọ n'ime mmụọ nke ụka ha kpọrọ Onyenwe anyị site n'aha Ya. Ọ na-akpọ ha ka ha hapụ echiche ọjọọ na mmehie, iji merie ọnwụ na ekwensu site na Mmụọ nke Onyenwe anyị, ka a tọhapụ ha pụọ n'ọnwụnwa nke ụwa a, ma buru ndị niile a gụrụ n'onye ezi omume, ibu ọrụ ndị ọzọ nọ na ya. obodo, site na ekpere, onyinye, na ọrụ.
Nyochaa onwe gị! Ị bụ otu n'ime ndị a kpọrọ na-ebu ibu ọrụ maka ndị ọzọ? Ka mmehie na ọnwụnwa ka na-emeri gị? Mara na Kraịst akpọwo gị n'aha gị iji jeere Ya ozi. Kedu ihe ị zara Ya?
Ị bụ nke m
Chineke dị nsọ na-emesi gị obi ike site n'amaokwu pụrụ iche, "Ị bụ nke m. Ọ bụghị naanị na m kere gị mana m agbapụtala gị n'echiche na omume nnupụisi gị, wee mee ka ị dị ọcha, doo gị nsọ ma kweta gị dịka onye m kweere. "Nkwenye a adịghị abịakwute gị n'ihi na ị dị mma karịa ndị ọzọ, mana n'ihi na ị kwetara mgbapụta Chineke, nke O meworo maka gị.
Onyenwe anyị na-akọwa gị, sị, "Ị bụ ihe dị oké ọnụ ahịa m. Ị bụghị nke gị ọzọ, ma ị bụ nke m. Abụ m Onyenwe gị ruo mgbe ebighị ebi. Ị bụ ihe pụrụ iche n'anya m, nke dị oke ọnụ ahịa. Aga m elekọta gị; Agaghị m ahapụ gị naanị gị; Anọ m n'akụkụ gị. Ị bụ nke ezinụlọ m na ezinụlọ m nke eluigwe. A na-echebe gị na ịhụnanya m. Abụ m nkwa gị. Aga m eburu gị ọrụ, agaghịkwa m echezọ aha gị. Ọ dịghị onye ga-anapụta gị n'aka m. A naghị echefu gị ma ị ga-adị ndụ na ọnwụ gị. M nọnyeere gị mgbe niile, ọbụlagodi ruo ọgwụgwụ oge. M na-akpọ gị, na ị ga-abụrụ m ọṅụ. "
E nwere nwa okorobịa nke rụsiri ọrụ ike wee zọpụta penny. N'ikpeazụ, o nwere ike ịzụta ụgbọala. Ugbu a, o nwere ike ịkwaga, na-agbago ugwu ma gbadata. O nwekwaghị nsogbu. Ọ na-asa ụgbọala ya ma lekọta ya. N'abalị, o nwetara ya, n'ihi ya, ndị ohi agaghị ezu ohi. Obi ya na echiche ya nile bu ihe onwunwe ya. Ya mere, ọ bụrụ na mmadụ dị mfe na-enwe obi ụtọ maka ihe onwunwe ya zutere ma lekọta ya ma kwụọ ụgwọ maka ya, lee ka Chineke dị ndụ ga-esi na-elekọta, chebe ma hụ onye kwere ekwe ọ bụla nke na-aza oku Ya n'anya.
Onye obula nke nuru olu nke Chineke n'obi ya ma meghee onwe ya nye ihita nke Kraist ma nata ike nke Mo ya gabu ihe ohuru. Mmụọ nke Onyenwe anyị ga-ebi n'ime onye kwere ekwe na Nwa Atụrụ Chineke ga-eduzi ya gaa ndụ jupụtara na ekele, ma mee ka udo na nkwekọrịta dịrị n'ime ya n'etiti ụwa jupụtara n'ihe ize ndụ na mkpa. Ndụ nke Chineke na-aga ma na-arụ ọrụ n'ime ndụ nke ndị ahụ a gbapụtara ahọrọ. Ndi afo ama osụk idem ọnọ Abasi nte Eyen esie eke spirit? Ka ị ka na-aga n'ebe dị anya site n'aka Onye Okike gị na Onye Mgbapụta gị ma hapụ ya ka ọ na-arịwanye elu?
Ị ghọtara mgbapụta gị?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ịhụnanya nke Onyenwe gị na mgbapụta zuru ezu Ya maka gị, anyị dị njikere izitere gị akwụkwọ enyemaka maka n'efu, nke nwere ike ịduzi gị ịbawanye n'okwukwe, ma ọ bụrụ na ị jụọ anyị maka ya.
N'ezie, Chineke akwadebewo mgbapụta ya maka mmadụ nile
Onyenwe anyi egosiwo ihan'anya Ya nye mmad niile, n'agbanyeghi ma ha di mma mao b iheo ji. Ọ chọrọ inye ha mgbapụta zuru oke ya n'efu. Mana anyi nwute na ihe ka otutu n'ime ha amaghi uru ha ma na-aga n'iru n'atu egwu. Ọ bụrụ na ịchọrọ inyere ndị enyi na ndị ikwu gị aka, na ha nwere ike ịghọta nkwụghachi zuru ezu maka ha, anyị dị njikere iziga gị nọmba ole na ole nke akwụkwọ nta a ma ọ bụrụ na ịrịọ maka ya. Na-ejere Onyenwe gị ozi n'ihi na O jerela gị ozi karịa ihe ị maara.
Page last modified on October 01, 2018, at 03:10 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)